Nepal Dayari | भरखरै पत्ता लाग्यो फोक्सोबाट “को”रोना स”खाप पार्ने यस्तो थेरापी दुनियाभर खुशीयाली । शेर गरौं ।
भरखरै पत्ता लाग्यो फोक्सोबाट “को”रोना स”खाप पार्ने यस्तो थेरापी दुनियाभर खुशीयाली । शेर गरौं ।
जेठ १६, २०७८ आइतबार ४५७ पटक हेरिएको
फोक्सोबाट को-रोना भाइरसकाे सं”क्रमण हटाउने थेरापी पत्ता लाग्यो ! विश्वभर को- रोना भाइरसले हा-हा-कार मच्चा-एको छ । यसका केही खोपहरु आइसकेका छन् भने केही अ”नुसन्धानका क्रममा रहेका छन् । को-रोना भाइरस फोक्सोमा पुगेर धेरै हा-नी पुर्याउछ ।
फोक्सोमा भा”इरसको सं,क्रमण हुँदा मु-त्युको सम्भावना धेरै हुन्छ तर अब भने वैज्ञानिकहरुले को- रोना भाइरसका क-ण हट्ने थेरापी पत्ता लगाएका छन् । थेरापीले फोक्सोमा भएको भाइरसको क-णहरु हट्ने दाबी गरिएको छ । अष्ट्रेलियाको ग्रिथिथ युनिवर्सिटीको एक टिमले यस्तो एन्टी भाइरल थेरापीबाट फोक्सोमा भएको को-भिड–१९ को क=ण ९९.९ प्रतिशत हट्ने पत्ता लागेको हो ।
यस थेरापीलाई को-रोनासँग लड्ने एक ठुलो ह-तियार भएको उनीहरुले दाबी गरेका छन् । यो अष्ट्रेलियाको मेजीज हेल्थ इन्स्टिट्युट क्वीसलैंडका अन्तराष्ट्र्रिीय वैज्ञानिकको टिमले पत्ता लागेको एन्टिभाइरल थेरापीले सफलता पाएको हो । यो टेक्नोलोजीले को-भिडका कणहरु पत्ता लगाउन र हटाउन खोज्ने मि-सा-इलको रुपमा कार्य गर्दछ ।
अनुसन्धानकर्ता प्रो.नाइजेलले थेरापीले भाइरसलाई दाहोर्राउन नदिने र विश्वव्यापी रुपमा को-रोनाबाट हुने मृ- त्युलाई रोक्न सक्ने जिकिर गरेका छन् । यसले कसरी काम गर्छः यो थेरापीले जीन साइलेन्सिंग नामको एक मेडिकल टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको हुन्छ । यो प्रविधि सबैभन्दा पहिला अष्ट्रेलियामा १९९० मा पत्ता लागेको थियो । जी-नलाई मौन श्वास रोगबाट बच्न आरएनहरुले प्रयोग गर्थे ।
आरएन डिएनए जस्तै एक प्रविधि हो । यसले आरएनको सानो टुक्रासँग काम गर्दछ । यी टुक्राहरु भाइरसको जीनोममा जोडिन्छन् र जीनोमलाई काम गर्न दिँदैनन् । यसले कोषिकाहरुलाई न-ष्ट गर्दछ । को- रोनाको एन्टिवाइरल उपचारहरू जनमविर र रेमाडेसिभिर, जसले को-रोनाका लक्षणहरूलाई कम गरेका छन् । साथै, यीनीहरुले को- रोनाले बिरामीहरूलाई तुरुन्त निको हुन मद्दत गरेको छ,
तर यो भाइरसलाई सीधा रोक्न पहिलो उपचारको रुपमा थेरापी पत्ता लागेको छ । यी औषधिहरु कोशिकामा ईन्जेक्शन मार्फत कोषिकामा पठाइन्छ । काेराे-ना भा- ईरस (काे-भिड – १९ ) बाट बच्न सबैले सामाजिक दुरि कायम राखाैँ र साबुन पानिले मिचि मिचि हात धुने बानि बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।। हाम्राे न्युजहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ ।
शेर गर्नुहोला ।
आजभन्दा ५ वर्षअघि क’रेन्ट लागेर दुवै हा’त गु’माएकी मेघा घिमिरेका टिकटकमा भिडियो(भिडियो हेर्नुस्)
बिनिता कुमाल बोल्नै नसक्ने भईन ,कठै रातारात यसरी लगियो अस्पताल (हेर्नुस् भिडियो )
भेन्टिलेटरमा उपचाररत कलाकार थापाकी छोरी लेख्छिन “मिल्ने भए बाबा, मेरै एक मुठी सास हजुरलाई दिने थिएँ”
गायक प्रकाश सपुत पछी आफ्नै कमाइमा घर बनाएकी नायिका पुजाले किनिन् यति महंगो कार !( भिडियो सहित)
काठमाडौ छोडेर बझाङ गएकी सोनिका गर्दै यस्तो काम, फेरीएको रुप समेत चि,न्नै नस,किने (भि, डियो हेर्नुस्)
भर्खरै बिवाह गरेका सबैका प्यारा सेन्मिखाले यसरी गरे फुटबल टिम जतिनै छोराछोरी पाउने तयारि (हेर्नुस् भिडियो )